Fanafody fanadiovana Hydrofluoroether ho an'ny antonta-pitsarana China Manufacturer
Description:HFE Inert Cleaner Precision Parts,HFE Inert Fanadiovana Zava-manararaotra,Inert Cleaning Agent Precision Parts
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny antonony > Fanafody fanadiovana Hydrofluoroether ho an&#39;ny antonta-pitsarana
Hydrofluoroether dia manana tsiranoka mahamay kokoa ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany.
Izany dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko ary tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Ireo toetra mampiavaka ny The Clean Cleaning:
7. Ny ranon-jiro fanadiovana Hfe Codorless aorian'ny fanadiovana dia azo averina amin'ny alàlan'ny fanivanana, ka hampihenana izany fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Ity Cleaning Solutions ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Ity Solon-tsakafo ity ho an'ny Semiconductor dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny fanamafisana ny mpanjifa, mora voatahiry ary
HFE Inert Cleaner Precision Parts HFE Inert Fanadiovana Zava-manararaotra Inert Cleaning Agent Precision Parts